Ụlọ ọrụ na -ahụ maka kọntaktị AC Ndị na -emepụta China na ndị na -ebubata ngwaahịa AC
Igwe ntụ oyi AC contactor
Onye na -emebi okirikiri Africa PG MCCB
onye na -emebi emebi General Protection circuit breaker PG
Ndị akwụgoro ụgwọ, ndị na -alụbeghị di ma ọ bụ atọ
KK Ahorow Circuit
Onye na -ejide Fuse RT18
Mgbanwe dịpụrụ adịpụ
Usoro MS116 Motorstarter
Onye na -ahụ maka ikuku conditioner
JVM10 Ụdị ọhụrụ dị ugbu a na -agbanwe agbanwe obere okirikiri ...
CJX2-F Series AC Onye na-akpọtụrụ
CJX2-F usoro AC contactor dabara maka AC 50/60Hz, voltaji gosiri na 1000V, sekit 115-800A dị ugbu a, ejiri maka imebi ogologo oge na mmalite ma ọ bụ njikwa moto. A na-ejikwa ya ijikwa okirikiri nkesa ike na ọkwa dị ugbu a nke 200-1600A.
JMC (GMC) usoro 20A-200A AC Contactor
JMC (GMC) usoro AC Contactor dị mma maka iji na sekit ruo 660VAC 50Hz ma ọ bụ 60Hz, nke enyere akara ugbu a ruo 95A, maka ime, gbajie, malite ugboro ugboro & ngwaọrụ na-ejikọ igwe, wdg, ọ ga-abụ onye na-egbu oge, onye na-ahụ maka kọntaktị na-ahụ maka ikuku, onye na-ebido kpakpando. ya na agba anọ na -ebugharị ọkụ, a na -ejikọ ya na mbido electromagnetic. A na-emepụta onye na-akpọtụrụ dị ka lEC60947-4 si kwuo.
CJX2-K (LC1-K) Ndị na-akpọ AC AC
CJX2-K usoro AC onye na-akpọtụrụ AC dị mma maka ojiji na sekit ahụ ruo ọnụego na ịmalite ugboro ugboro, na-achịkwa moto AC. Mgbakwunye nke otu kọntaktị inyeaka na onye na -akpọtụrụ, yana mgbakwunye ọsọ agba ọkụ kwesịrị ekwesị, nwere ike ime ihe iji kpuchido sekit ahụ ibubiga oke ókè. Ọ dabara na 1EC60947-4-1.
Ọnọdụ na -agba ọsọ na ọnọdụ nrụnye:
1. Ọnọdụ ikuku ikuku: -5 ℃+40 ℃. nkezi uru ekwesịghị gafere +35 ℃ n'ime awa 24
2. Elu: na kacha 2000m.
3. Ọnọdụ ikuku: Mgbe okpomoku dị na 40 ℃, iru mmiri nke atomsphere kwesịrị ịdị na kacha 50%.Mgbe ọ na -adịtụ ala, ọ nwere ike inwe iru mmiri dị elu. Ọnwa ọbụla oke iru mmiri nwere ike ọ gaghị abụ karịa 90%.E kwesịrị iwere usoro pụrụ iche n'ihi omume igirigi.
4. Klas nke mmetọ: Klas 3
5. Ngalaba nwụnye: Ⅲ
6. Ọnọdụ nwụnye: Ogo nke ọchịchọ n'etiti elu dabara na elu kwụ ọtọ ekwesịghị ịfe II
7. Mmetụta mmetụta: Ekwesịrị ịwụnye ngwaahịa ma jiri ya mee ihe na -ama jijiji ma na -emetụtakarị.
10KV mkpuchi ihe Ịkpọpu mwekota
Ezubere CJX2-Fseries AC onye ọrụ ngo (nke a ga-agbada onye na-akpọtụrụ ya) maka ime na imebi na sekit isi, na-amalitekarị na na-ejikwa moto AC na sistemụ ike yana ugboro AC 50 Hz (ma ọ bụ 60 Hz), ma ọ bụrụ na ejiri eriri pụrụ iche, ugboro ole nwere ike be40 ~ 400Hz, voltaji arụ ọrụ ruru 630v, Enwere ike iji ya na ngwa eletriki dị iche iche, electromotor na njikwa sekit ma ọ bụrụ na ejikọtara ya na nzaghachi kwesịrị ekwesị ma ọ bụ ngwa eletriki ọzọ. Na mgbakwunye, ọ nwere ike na -arụ ọrụ dị ka onye na -ahụ maka ikuku na -arụ ọrụ nke nwere otu onye na -ahụ maka inyeaka, isi na -egbu oge ikuku na mgbachi igwe, ma ọ bụ mmalite ọkụ eletrik na oge mgbapụta ọkụ kwesịrị ekwesị.
CJX2-K (LC1-K) Usoro AC Contactor Series
CJX2-K usoro AC ndị na-akpọ AC dị mma maka sekit na ọsọ na-amalitekarị ọsọ iji chịkwaa motọ AC. Mụbaa otu kọntaktị kọntaktị nke onye na -ahụ maka kọntaktị, bie ọkụ na -agba agba ọkụ kwesịrị ekwesị, ma nwee ike ime ihe iji chebe sekit ahụ ka ọ ghara ibu ibu. Ọ na-akwado IEC60947-4-1
CJX2-D usoro AC contactor
CJX2-D usoro AC onye na-akpọtụrụ AC dị mma maka iji na sekit ruo 660V AC 50Hz ma ọ bụ 60Hz, nke dị ugbu a ruo 660A, maka ime, imebi, ịmalite na ịchịkwa moto AC, yana mgbakwunye kọntaktị kọntaktị. ngụ oge ngụ oge & ngwaọrụ na-ejikọ igwe wdg, ọ na-abụ onye na-egbu oge, onye na-ahụ maka njikọ igwe, kpakpando-edlta starter.with relay relay, a na-ejikọ ya na mbido electromagnetic.
Size & arịọnụ Size
20-40 FLA 1p/2p AC CONDITIONING AC AIR
Ndị na-ahụ maka ikuku oyi (nke a na-akpọzi ndị na-akpọtụrụ ya), nke dabara na 50Hz ma ọ bụ 60Hz, yana klaasị ọkwa voltaji arụ ọrụ na AC-8a
Ogo a tụrụ na 240V ma ọ bụ 277V ruo 40A sekit dabara maka ịmalite na ịchịkwa AC Motors (compressors) na ibu ndị ọzọ.
A na-ejikarị eme ihe na ụlọ ọrụ ngwa ụlọ, ọkachasị na ụlọ ọrụ ntụ oyi. Nwere ike dochie otu ụdị mbubata na ngwaahịa ọdịnala ụlọ,
Zute IEC 60947. 4, UL508 na GB 14048 .4 ụkpụrụ.
1.Loo obere VA maka ngwa nju oyi na ndụ abawanye.
3.Idị mkpuchi ihe eji eme ihe dị iche iche nwere oghere na -arịgo.
4. kọntaktị okpukpu abụọ na -eme ka ọ dị mma ma mebie.
5.Screw terminal ma ọ bụ njikọ nrụgide na njikọta ngwa ngwa 1/4.
6.Enyere ya n'ụdị niile maka nrụnye dị mfe.
50-90 FLA Air Conditioning Ac Contactor
LC1-D Series AC Contactor dabara maka iji na sekit ruo 660v volta, AC 50hz/60hz, nke dị ugbu a ruo 95A, maka ime, na-agbaji ugboro ugboro na-ejikọ ọnụ na igwe na-ejikọ igwe wdg, ọ na-aghọ onye na-akpọ dalay, igwe onye na-akpọchi akpọchi, onye na-ebido kpakpando-delta. ya na relay relay, a na-ejikọ ya n'ime ihe mbido electromagnetic.
CT Series Ezinaụlọ onye na -akpọtụrụ
Ndị na -ahụ maka AC Series Series AC dabara adaba maka iji na sekit ruo voltaji 400V AC 50Hz ma ọ bụ 60Hz, nke dị ugbu a ruo 63A, maka ijikwa ngwa ụlọ na obere ojiji dị ka ojiji, yana na -achịkwa itinye ụgbọ ala nke onye. A ga -ebelata ike ịchịkwa, a na -eji ngwaahịa ahụ maka ezinụlọ, ụlọ nkwari akụ, ụlọ wdg.
JMC Series Ọrụ Contactor
Usoro JMC (GMC) AC Contactor dị mma maka iji na sekit ruo 660VAC 50Hz ma ọ bụ 60Hz, nke edepụtara ugbu a ruo 95A, maka ime, imebi, ịmalite na ngwa na-ejikọ igwe na ihe ndị ọzọ, ọ na-aghọ onye na-egbu oge, onye na-ahụ maka njikọta ikuku, onye na-ebido kpakpando. ya na agba anọ na -ebugharị ọkụ, a na -ejikọ ya na mbido electromagnetic. A na-emepụta onye na-akpọtụrụ dị ka IEC60947-4 si kwuo.
CJX2-D usoro AC onye na-akpọtụrụ AC dị mma maka iji na sekit ruo 660V AC 50Hz kr 60Hz, nke enyere ugbu a ruo 660A, maka ime, imebi, ịmalite na ịchịkwa moto AC, yana mgbakwunye kọntaktị kọntaktị. ngụ oge ngụ oge & ngwaọrụ na-ejikọ igwe wdg, ọ na-abụ onye na-egbu oge, onye na-ahụ maka njikọ igwe, star-edlta starter.with relay thermal, a na-ejikọ ya na mbido electromagnetic。